အိန္ဒြာ: သုံးဆယ့်နှစ်နှစ်စာ အတွေး
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ဆိုတော့.. တားတားနဲ့တိတ်မကွာဝူးဘဲ။
တားတားက ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့။း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျရောက်လာမယ့် မွေးနေ့မှာ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါစေ မကြီးရေ..။ (ဒါလည်းမကြီးအိန္ဒြာလို အကြိုဆုတောင်းထားတာ)
ဖြတ်ကနဲအလင်းစူးစူး ပရမ်းပတာဝင်ဆောင့်လို့ မျက်ခွံတွေမှိတ်အချ မမှိတ်ခင်တဒင်္ဂံကလေး ရိပ်ကနဲတွေ့လိုက်ရတာ ငါမှငါ..မှန်တစ်ချပ်မှမရှိပဲငါ့ကိုငါပြန်မြင်နေရတယ် ညို့နေတဲ့တိမ်လိပ်တွေ ပစ္စက္ခမှာကောင်းကင်ကြီးကို စပါးကြီးမြွေတစ်ကေင်လိုရစ်ပတ်နေဆဲ.. ငါကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်တွေမှာတောင် သူရဲကောင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါ အခုလူတွေကမျှော်လင့်တကြီး စုတ်တသတ်သတ်.. အရေးတယူတခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ ထုတ်ဝေသူ..ငါ့ဘေးမှာဒူးထောက်လို့ ငါ့ကိုတသသ တဖွဖွခေါ်နေ
ခပ်လှမ်းလှမ်းကမျက်လှည့်ဝိုင်းက မျက်လှည့်ဆရာတောင် ငါ့ကိုမြင်ပြီးတိမ်ပေါ်က သူ့ကြွားလုံးတွေ မသိမသာပြန်ရစ်ငင်နေရဲ့
တမင်မဖြဲရပဲ ဒူးပြဲနေတဲ့ ငါ့ဂျင်းဘောင်းဘီလေးဘေးမှာ
ငါ့အတ္တတွေတနင့်တပိုးနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အနုပညာတွေက တစက်စက်နီထွေးထွေး
တိုက်ပွဲဝင်စိတ်နဲ့ အအိပ်ပျက်အစားပျက် ဖန်တည်းခဲ့တဲ့
တောင်ရှည်ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး လှော်တက်ကိုင်ထားတဲ့ အရေပြားဒေါင်းကွက်ပရပွနဲ့ လူရဲ့အမေး..ငါ့ကဗျာလေးထုတ်ပေးတော့..
(ကဗျာလေးကို ဘေးဖက်ကနေ ခံစားကြည့်ထားတာမို့
ကဗျာက အားလုံးကောင်းတယ်.. တိမ်တွေလျှော့ပြစ်မယ် ဆိုတာတော့ မမိုက်ဘူးဗျာ.. အချင်းချင်းတွေ ဂလိုလုပ်စရာလားလို့...း)။
အရောင်တွေ နဲနဲကဲပေမယ့်..ပွဲမ၀င်တော့တဲ့ ခေတ်မှာ..ဖဲဆင်ရိုက်တာလည်း ကိုယ့်သမိုင်းဘဲ
မဟုတ်လား..ရာဇ၀င်ဆိုတာ ပွန်းချင်ပွန်းမယ် ပဲ့ချင်ပဲ့မယ်..နှောင်းလူကတော့ မဲ့ရွဲ့ ဦးမှာဘဲ..
ခေတ်ရေစီးမှာ လိုက်ပါစီးမျော..အတ္တနဲ့ လှည့်ကွက် ကိုဆုပ်ကိုင်..မျက်လှည့်ဝိုင်းမှာ လက်ခုပ်ကို..
အားရပါးရတီးလိုက်..ဘ၀ဆိုတာ ခဏတာနားခိုရာ စခန်းတစ်ခု..လိမ်ဆင်နဲ့ လိင်စိတ်ကိုဘုံထုတ် လူဆိုတဲ့ ရုပ်မှာ မပါမဖြစ်တာကမေတ္တာ..
သေခြင်းရဲ့ စာမျက်နှာမှာ..လှပစွာဘဲ ကဗျာတွေရေးခဲ့ဦးမယ်..။
ဒီဇင်ဘာမွေးတဲ့သူတွေက သဘောကောင်းတယ် ၊ အေးချမ်းတယ်တဲ့။ ဟုတ်မှာပါပဲ။ မွေးနေ့အကြို တင်တဲ့ ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး မွေးနေ့မှာလဲ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ကြို ဆုတောင်းလိုက်တယ် ညီမရေ။
အိန္ဒြာ ၄၅ နှစ် ကျော်နေပြီ . . . ၃၂ နှစ်က ရေးထားတဲ့ ကဗျာကို တင်ထားတာ . . . ဟီး . . ဟီး . . . secretတွေကို ပြောလိုက်တာ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် . . . :P
သေဒါဏ်းရဲ့ စာမျက်နှာနံပါတ် ၃၂.. ကို
ဖတ်ခွင့် ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ...
တို့ အမက ဆရာကျတာလည်း မပြောနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ၃၂ နှစ်က ကဗျာ ကြီးကောက်တင်ပြစ်လိုက်တာပါပဲ...အင်း လုပ်ပေါ့ဗျာ... ဒီကြားထဲ တိမ်တွေကိုလျှော့မယ်ဆိုပြီး ၃၂နှစ်ကတည်းကကြံစည်ထားတာ ခုမပဲသိတော့ တယ်....ဟားဟားဟား...
ကဗျာလေးက ကောင်းလှတယ် .. အောင်ရင်ငြိမ်း ရဲ့ ကဗျာထဲက စကားလုံးတွေနဲ့ ကွန်မန့်ပေးသွားတယ်..
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်သွားပါစေ..။